Ukraine International Airlines dia nandefa fahatsiarovana ireo niharan'ny fanafihana tao Iran
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Ukraine International Airlines dia nandefa fahatsiarovana ireo niharan'ny fanafihana tao Iran
Febroary 17, 2020
Nanomboka ny fananganana fahatsiarovana ireo niharam-boina tamin'ny fanafihana tao Iran ny Ukraine International Airlines
Ny Alatsinainy 17 Febroary, ao amin'ny Boryspil International seranam-piaramanidina, Ukraine International Airlines nandefa ny fananganana zaridaina iray tao memoriam an'ireo niharam-boina tao amin'ny fiaramanidina mpandeha UIA notifirin'ny mpampihorohoro Iraniana tamin'ny 8 Janoary 2020, tany Tehran.
Ho fahatsiarovana ireo namoy ny ainy tany an-danitra Iran, nikarakara lanonana ofisialy fametrahana ny vato voalohany amin'ny zaridaina fahatsiarovana i Ukraine International. Nanatrika ny lanonana ny fianakaviana sy ny naman'ny maty; Vadym Prystaiko, ny minisitry ny raharaham-bahiny any Ukraine; Oleksiy Danilov, sekreteran'ny filankevi-pilaminana sy fiarovana ny firenena any Ukraine; solontena diplaomatika an'ny firenena namoy ny olom-pireneny - Ramatoa Melinda Simmons, masoivoho miavaka ary Plenipotentiary an'ny Fanjakana Mitambatra anglisy sy Irlandy Avaratra tany Ukraine; Andriamatoa Andreas Edevald, Consul, sekretera faharoan'ny masoivohon'i Soeda any Ukraine; Andriamatoa Sardar Mohammad Rahman Oghli, Ambasadaoro Miavaka sy Plenipotentiary ao amin'ny Repoblika Islamikan'i Afghanistan mankany Ukraine; solontena ofisialin'ny Masoivohon'i Kanada sy ny iraky ny polisy kanadianina any Okraina - ary koa ny ekipan'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Iraisam-pirenena sy Boryspil, ny mpiara-manorina sy ny mpikambana ao amin'ny birao Safe Sky Charity Fund, ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta ary ny mpitondra sivika any Ukraine.
“Te-hanondrika ny lohako amin'ny alahelo aho ho an'ireo niharam-boina tamin'ny sidina PS752, - hoy i Vadym Prystaiko, minisitry ny raharaham-bahiny any Ukraine. - Tsy maintsy nisy izany. Tsy maintsy nitranga teto amin'izao tontolo izao izay nanambarana ny lalàna sy ny filaminana fa manan-danja indrindra. Manao izay fara herinay izahay hamerenana amin'ny laoniny ny fahamarinana ary apetraka aminay ireo tompon'andraikitra. Mangataka onitra fotsiny izahay noho io loza io. ”
“Androany, 40 andro lasa izay taorian'ny famoizana ain'olona 176 mahatsiravina tany an-danitra Iran, - hoy ny nomarihin'i Yevhenii Dykhne, tale jeneralin'ny Ukraine International. - Hanamarihana ity daty ity sy hanomezam-boninahitra ireo niharam-boina tamin'ny sidina PS752 Tehran - Kyiv dia nanapa-kevitra ny izahay ao amin'ny Ukraine International fa hanangana valan-javaboary fahatsiarovana. Misaotra betsaka an'izay rehetra nizara taminay tamin'ity fotoana ity izahay ary nanohana anay tamin'izao fotoan-tsarotra izao. ”
Farany, mikasa ny hanangana tsangambato noforonina ny zotram-piaramanidina taorian'ny valin'ny fifaninanana misokatra teo amin'ireo mpanao sokitra Okrainiana.
“Izay nanokana ny fiainany tamin'ny fiaramanidina dia ao anatin'ny fianakaviana mpihavana. Tamin'ny faha-8 janoary lasa teo dia niaritra fatiantoka mahatsiravina ity fianakaviana ity, - nomarihin'i Pavlo Riabikin, tale jeneralin'ny Boryspil International Airport State Enterprise. - Miara-malahelo amin'ireo namantsika sy mpiara-miasa aminay avy any Ukraine International izahay, ny fianakavian'ny maty ary izao tontolo izao. Mahatsapa izahay fa ilaina ny mampaharitra ny fahatsiarovana ireo niharam-boina tamin'ny lozam-piaramanidina lehibe indrindra teto Okraina. ”
Fanampin'izany, nanangana ny tahirim-pankasitrahana Safe Sky ireo mpitarika sivily Okrainiana mikendry ny hanangona vola ho an'ny fianakavian'ireo Okrainiana maty, nampahafantatra ny besinimaro momba ny famotopotorana ny anton'ny loza, ary nanombohana ireo dingana lehibe momba ny fiarovana sy fiarovana ny sidina sivily any Okraina sy manerantany.
Aiza ary ahoana no handehanan'ny Alemanina amin'ny ho avy?
Ny Euromic dia mifidy filoha vaovao